Phaphamisa ibandla lakho - Sikunye
Phaphamisa ibandla lakhoIvo Kittel2021-03-08T14:30:34+02:00
Phaphamisa ibandla lakho
Njengomholi webandla, wena nebandla lakho ningaba yingxenye yokunikeza zonke izingane isiqalo esiqinile sempilo.
ufuna ukubona izingane emphakathini wakini ziphumelela futhi zifinyelela emandleni ezinikezwe nguNkulunkulu?
ufuna ukubona ibandla lakho ligona futhi libusisa izingane ezincane, njengoJesu kuMarko 10:16?
ufuna ukubona isonto lakho liwumphakathi lapho imindeni izizwa yamukelekile, iphephile futhi ixhunyiwe?
Lokho Okuthola Njengebandla Eliphaphanyiswe Kanye No Sikunye:
Ukutholakala kwemicimbi yokuqeqesha ukuhlomisa amalungu abalulekile nabaholi ebandleni lakho
Ukufinyelela kuzinsizakalo ezahlukahlukene zokusekela ukuqinisa umsebenzi wakho
Ukufinyelela kwizinsiza nokuqukethwe okuvela emicimbini ongakwazanga ukuya kuyo
Ukuxhuma kwamanye amabandla aphapheme
Uma uthi YEBO kulokhu okungenhla, phaphamisa ibandla lakho.
BHALISA / BHALISA ISONTO LAKHO
Uzocelwa ukuthi ugcwalise ifomu elizokunikeza isithombe sokuthi ibandla lakho li-‘lihlobene noFTD ’kanjani njengamanje. Ngemuva kwalokho uzokwaziswa ngemicimbi ezayo. Okwamanje, ungafinyelela kuKhi Yokuqalisa ukuthola umuzwa wezinye zezinyathelo zakho ezilandelayo.
Uma uke wakwenza kwasebenza ngaphambilini, kodwa ungakwazi ukuthola Ikhithi Yokwenza kusebenze, chofoza lapha.